Marvelous Nakamba Archives - Zimbabwe Situation
Top 5 Richest Zimbabwe Soccer Stars
Zimbabwe is one of the African countries that boast of having crème de crème in the world of soccer. Despite facing stadia ban due to poor standar ...
Zimbabwean’s love sport, with a large majority watching and even taking part in sport. Like most countries in Africa, football is by far Zimbabwe’ ...
Will Zimbabwe Qualify for World Cup 2022?
Zimbabwe’s Warriors face an uphill task in their pursuit to qualify for the 2022 FIFA World Cup in Qatar. They have been pooled in Group G alongsi ...
After enjoying his first season in Aston Villa, Zimbabwe star Marvelous Nakamba is now going through trouble, as the fans of this club started a “raci ...